1। सिबूतामिनले वजन घटाने औषधिको रूपमा
2। सिबुत्रामिन के हो?
3। सिबूत्राम: यो किन धेरै लोकप्रिय छ?
4। सिबूत्रामिन एचसीएलले मोटापालाई प्रभावकारी बनाउँछ
5। तपाईंको जीवनमा सिबुट्रामिन एचसीएल ल्याउनुहोस् र सुरु गर्नुहोस्
6। Sibutramine एचसीएल समीक्षाहरू
7। सिबूतामिन एचसीएल मूल्यहरु
8। कसरी साँचो सिब्युट्रिनइन एचसीएल अनलाइन किन्न
9। लिपि अप-सिब्राम्रामिन एचसीएल (एक्सएनएक्सएक्स- एक्सएनएक्स-एक्सएनएक्स)
Sibutramine एक वजन घटाने को रूप मा ड्रग
वजन घटाने हालैमा धेरै लोकप्रिय भएको छ; यसले उमेर, दौड वा यौन चयन गर्दैन। केहीको लागि, यो सानो मात्र रहन मात्र जुननिरपेक्ष हुन सक्छ, तर अरु मोटापाबाट पीडा हुन सक्छ। वजन कम गर्नु एक योग्य लक्ष्य हो किनभने न केवल यसले तपाईंलाई महसुस गर्छ र राम्रो लाग्दछ तर यो पनि तपाईंलाई एक स्वस्थ जीवनशैली बाँच्न सक्छ।
मोटापा एक गंभीर पुरानो बीमारी हो जसले सकारात्मक ऊर्जा ब्यालेन्सको बारेमा ल्याएको छ। ऊर्जा इनपुट र ऊर्जाको सेवन बीचको भिन्नता भनेको ऊर्जा संतुलनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यदि ऊर्जा को सेवन शरीर को आवश्यकता को तुलना मा अधिक छ, तब अधिशेष ऊर्जा शरीर को बोसो सेल मा संग्रहीत गरिन्छ .सबै भन्दा फैटी ऊतक को वजन बढ्छ, कुल शरीर को वजन पनि बढ्छ। यसले अन्य रोगहरूको विकासको लागि खतरा उत्पन्न गर्दछ। Obesity dyslipidemia, ischemic हृदय रोग, र मधुमेह mellitus जस्तै etiopathogenesis र गैर-संक्रामक रोगहरु को कारण बनता छ।
थाहा छ कि तपाइँ मोटेको हो भने, यदि तपाई उच्च वा सामान्य दायरामा आकलन गर्नुहुन्छ भने तपाइँको शरीरको मास इन्डेक्सको माप पर्दछ। BMI ले यो जाँच गरेर निर्धारण गर्दछ कि तपाईको वजन तपाईंको उचाइको लागि उपयुक्त छ कि छैन। 25-29.9 को BMI ले एक भन्दा बढी शरीरको वजन छ भनेर देखाउँछ। 30 र माथिको BMI ले संकेत गर्दछ कि एक मोटापे देखि पीडित छ।
मानिसहरू मोटापछि किन ग्रस्त हुन्छन्? यो एक महत्वपूर्ण प्रश्नहरु मध्ये एक छ जसले धेरै मानिसहरूको दिमाग पार गरेको छ। पहिलो धेरै कैलोरीहरू खरिद गर्दैछ, जस्तै, डेयरी उत्पादनहरू। अनौपचारिक खाद्य पदार्थहरू हानिकारक कारण हानिकारक सामग्री, जीएमओ, स्वाद, रङन्ट्स, एन्टिन्सेन्डर र संरक्षकहरूको कारणले पनि चिनिन्थ्यो। जीवनभरको अभ्यास लिंदा पनि वसाको जम्मा हुन सक्छ। पर्याप्त नींदको कमी अर्को कारण हो किनभने यो हार्मोनल परिवर्तनको लागी हुन सक्छ जसमा बारीमा भूख वृद्धि हुन्छ। केहि प्रकारका दबाइहरु जस्तै एंटीडिडेंटेंट्स, एन्टिकोसील्लेन्टन्ट पनि वजन संग जुडे भएका छन्। अन्तमा, केही मोटापेसीका कारण जीन पनि जिम्मेवार हुन सक्थे।
चूंकि 1950, मोटापा र अत्यधिक शारीरिक वजन घटनाहरू विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको छ। प्रत्येक तीन वयस्कों मध्ये एक भन्दा मोटापे मा पीडित हो, डाक्टरहरूले वजन घटाने वाला उपचार संग आने को उद्देश्य मा पढाई गरेको छ।
यसैगरी, सिबुट्रामिन एचसीएलले वजन घटाने उत्तेजित गर्न प्रभावकारी साबित भएको छ .बाइब्रामामिनसँग धेरै मिनिमेक्टिल, लिइन्डेक्स, सिब्रुबिल, सेबुट्रेक्स, मेरिडिया, रेडुल्टिल छन्। जबकि यो अतिरिक्त वजन बहाउन सजिलो नहुन सक्छ, सुसमाचार छ Sibutramine एचसीएलले विपरीत साबित गरेको छ। अहिलेसम्म, यो वजन व्यवस्थापनको लागि चीज हो किनभने यो कुशलतापूर्वक र सुरक्षित रूपमा तपाईंको शरीरको मोट कम गर्नेछ। अब तपाईं अलविदा बोली गर्न को लागी अनन्त डाइट्स र अधिक वजन को साथ सौदा गर्न अपर्याप्त अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ।
सिबुत्रामिन के हो??
सिबेट्रामिन एचसीएल रासायनिक संरचना
Sibutramine एक weightloss दबाइ हो जुन मस्तिष्क मा न्यूरोट्रांसमीटर को प्रभावित गरेर काम गर्दछ। न्युरोट्रांसमिटरहरूले रसायनहरू हुन् जुन तंत्रिका बीचको संचारमा सहयोग गर्दछ। एकपटक तंत्रिका यी न्यूरोट्रांसमिटरहरू रिलीज भएपछि, तिनीहरू आफैलाई अन्य तपस्याहरूमा संलग्न हुन सक्छ, वा तिनीहरूलाई रिहाएर ती तंत्रिका द्वारा तिनीहरूलाई फिर्ता लिन सकिन्छ। यो प्रक्रियालाई पुनःप्लेक भनिन्छ।
कार्यको मोड- सिबोटिनिन, नेरिपेइनफाइनन, र डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को पुनःअपेक को रोक गरेर सिब्यूट्रामिन काम गर्दछ। एकपटक त्यहाँ पुनःअपको अवरुद्ध हुँदा, तंत्रिका कोशिकाहरूमा न्यूरोट्रांसमिटरहरूको सन्तुलन प्रभावित भएको छ त्यसकारण तंत्रिकाले कार्य परिवर्तन र अन्तरक्रिया गर्न परिवर्तन गरेको छ। सिबुट्रामिन र यसको सक्रिय मेटाबोलाइट्स (एमएक्सएनएमएक्सक्स र एमएक्सएनएक्सएक्स) मोनोआइम्सको रिहाईमा काम गर्दैन। पुनरावृत्तिको अवरोधको माध्यमबाट, सिबुट्रामिनले भूखमा कमी र थोरै स्वभावको कमी बढाउँछ, जसले गर्दा एकको खानाको मात्रा कम हुन्छ।
अवशोषण- सिबुट्रामिन एचसीएलले मौखिक प्रशासनको पछिल्ला छिटो अवशोषित गरेको छ। यो लिभरमा एक व्यापक पहिलो-पास ब्रेकडाउनको माध्यमबाट जान्छ जहाँ त्यहाँ डाय-डेमथिथाइल चयापचयको निर्माण हुन्छ। यद्यपि यसको पूर्ण बायोव्वाटटिभ थाहा छैन, कम से कम एक मौखिक खुराक को 77% अवशोषित हुन्छ।
वितरण- सिबेट्रामिन एचसीएलले शरीरको ऊतकमा छिटो वितरण गर्दछ।
प्रोटीन बाध्यकारी- Sibutramine को लागी, मानव प्लाज्मा प्रोटीन को बाध्यकारी प्रोटीन 97% मा धेरै अधिक छ। मानव प्लाज्मा प्रोटीन मा M1 र M2 प्रोटीन बाध्यकारी 94% हो।
जित्ने प्रोटीन बाध्यकारी उच्च छ, सेबुट्रामिन एचसीएलले यसको सक्रिय मेटाबोलाइट्स, आधारभूत विशेषताहरू र यसको कम चिकित्सकीय सावधानीको कारण अत्यधिक प्रोटीन-बाधा भएका अन्य औषधिहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दैन।
Biotransformation-Sibutramine एचसीएल मुख्यतः cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) isoenzyme द्वारा metabolized मा दुई सक्रिय metabolites M1 र M2 उत्पादन गर्न। यी दुई हाइड्रोक्सिलाइटेड र निष्क्रिय चयापचय उत्पादन गर्न को लागी संकुचित हुन्छ। यदि गुर्दे हल्का देखि मध्यम हानि पुग्छ भने, यो सिब्राम्रामिन एचसीएल वा सक्रिय मेटाबोलाइट को फार्माकोकोनिनेटिक्स लाई असर गर्दैन।
उन्मूलन- यो लिभर को माध्यम ले निष्क्रिय मेटाबोलाइट्स को रूप मा मुख्य रूप से परिभाषित गरिएको छ। यदि गुर्दे कुनै पनि रोगबाट ग्रस्त हुन्छ, यसले AUC, सक्रिय मेटाबोलाइट्स, आधा-जीवन, र सिब्रोट्रिन एचसीएलको अधिकतम प्लाज्मा सावधानी परिवर्तन गर्दैन।
सिबेट्रामिन एचसीएल आधा-जीवन- 1.1 घण्टा
1988 मा युटिंगम, यूकेमा 1995, BASF / Knoll एजीमा बूट द्वारा 1997 मा पत्ता लगाइयो Sibutramine एचसीएल Boots Research Division को अधिग्रहण गर्यो, र Knoll फार्मास्यूटिकल्स ले यसलाई विपणन शुरू गर्यो। हालै, यो एबट लेबोरेटरीजद्वारा मार्केटिङ गरिएको र निर्माण गरिएको थियो र निम्न ब्रान्ड नामहरूमा बेचेको छ; Sibutrex, Siredia, Meridia, Reductil। XNUMX मा यो मोटापे को लागि दबाइ को रूप मा खाद्य र औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित भएको थियो।
सिबूत्राम: यो किन धेरै लोकप्रिय छ?
वजन कम गर्न बोलीमा धेरै व्यक्तिहरूले सिबूत्रामिन एचसीएल लिने विकल्प छ। तर के यो यति लोकप्रिय बनाउँछ? सिबुट्रामिन एचसीएल एक एजेन्सी हो जसले मौखिक प्रशासनलाई मोटापेक्षा र कुनै पनि वजन घटानेका मुद्दाहरूको सामना गर्न व्यवस्थित गर्दछ। यसले वजन व्यवस्थापनमा रुचि राख्ने धेरै मोटे रोगीहरूको हृदय जितेको छ। हरेक दिन लिएर उनीहरूले महत्त्वपूर्ण वजन बहाए। साथै, यो पहिले नै हराएको वजनको पुन: प्राप्त गर्न रोक्छ। 2019 Gonadorelin एसीटेट को सबै भन्दा व्यापक परिचय
डाक्टरहरुले यसलाई पहिले प्रयोग गर्नुभएका असाधारण नतिजाहरूको कारण अधिक रोगीहरूलाई यो जारी राख्न जारी राख्छन्। यो कुशलतापूर्वक लडाइँ मोटाइको रूपमा जान सकिन्छ र थप शरीरको चिसो जलाइदिन्छ। यस औषधिको सन्दर्भमा धेरै व्यक्तिहरूसँग सकारात्मक समीक्षाहरू छन्, यो अझै पनि उत्तमको रूपमा खडा हुन्छ वजन घटाने औषधि.
सिबूत्रामिन एचसीएलले मोटापालाई प्रभावकारी बनाउँछ
यदि तपाईं मोटापासँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले सिब्युट्रामिन एचसीएल लिने विचार गर्नुपर्दछ। मौखिक anorexiant हुन, यो मस्तिष्कमा रसायन परिवर्तन गरेर वजन घटाने मा सहायता गर्दछ र बारी मा वजन को रखरखाव को प्रभावित गर्दछ। मोटे रोगीहरूमा सिबुट्रामिन एचसीएलको औषधि उपयुक्त आहार र व्यायामका साथ प्रयोग गरिएको वांछित परिणामहरू प्राप्त गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसबाट, यसले शरीरमा अतिरिक्त क्यालोरीलाई प्रभावकारी रूपमा जलाउनेछ र यसैले वजन घटाने उत्तेजित गर्दछ।
सिबूत्रामिन एचसीएल परिणामहरू
Sibutramine एचसीएल Satiety मा सुधार। नतिजाको रूपमा, तपाईले यसलाई पूर्णतया पूर्णतया महसुस गर्न सक्नुहुनेछ जब सम्म तपाईले तपाईको नियमित भोजनको बाहेक अन्य चीजहरू स्केटिङ गर्ने प्रलोभनहरू घटाउनुभयो। यदि तपाईं आफ्नो खानाको अंशहरू नियन्त्रण गर्न संघर्ष गरिरहनुभएको छ भने, यो दबाइ ठूलो सहयोग हुनेछ किनभने यसले अधिक खाने को आग्रह गर्न कम गर्नेछ। यसले थर्मोजेनेसन सुधार गरी शरीरमा ऊर्जा व्यय बढाउँछ। थर्मोजेनेसिस प्रक्रिया हो। त्यहाँ शरीरको क्यालोरीको ज्योतिमा गर्मीको उत्पादन हो। एक पटक एक सिब्राम्रामिन एचसीएल औषधि लिन थालेपछि शरीरमा वसाको मात्रामा उल्लेखनीय कमी छ। एक 5-10% कमीलाई रोगीहरूको आधारभूत वजनमा यसलाई देखाइन्छ। कमर परिधिमा कमी पनि कमसेकम वसा ऊतक र एक सुधारिएको लिपिड प्रोफाइल पनि छ। डाईस्ट्रोलिक र सिस्ट्रोलिक रक्तचाप दुवैलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा कमी गर्न रिपोर्ट गरिएको छ।
सिबुट्रामिन एचसीएल (एक्सएनएक्सएक्स- 84485-00)
यो सेतो सामान्य रूपमा जान्छ मेरिडिया। किनकी सिबुट्रामिन एचसीएल मौखिक औषधि हो, यसको मौखिक प्रशासनले छिटो अवशोषणको निम्त्याउँछ। न्यूनतम 77% यो एक मौखिक खुट्टामा अवशोषित हुन्छ। खुल्ला दिन एकपटक 10-15mg हुनु पर्छ। तथापि, शरीरको अवस्थाले खुट्टा निर्धारण गर्दछ। यो सल्लाह दिइएको छ कि तपाईंले माथि 120mg को माथि लिनु हुँदैन सिबूत्रामिन एचसीएलएक दिनमा सिबुत्रामिन एचसीएल प्रभावकारी छ भनेर सुनिश्चित गर्न, उत्पादकहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ।
तिनीहरूले एल्केलिटिको डिग्री र उत्पादनको अम्लतालाई नियन्त्रण गर्नु पर्छ यो एसिड आधारमा नुनमा परिणत गर्नबाट रोक्न। यदि यो ठाउँ पुग्छ भने, यो परिणामलाई प्रभावकारी रूपमा प्रभावकारी बनाउनेछ।
उनीहरूले अन्य व्यञ्जनहरू ठीकसँग जोड्नुपर्छ, वा अरूले दुबै प्रभावहरू जस्तै खराब सास, दाँया अनुहार र कब्जानुसारको कारण पाउनेछन्।
सिबुट्रामिन एचसीएलले कहिल्यै रोप्ने निकायहरूसँग मिल्दो हुँदैन किनकी तिनीहरूसँग बलियो क्षारीयता छ। चूंकि सेबुट्रामिन एचसीएल एक बलियो एसिड हो, यसको मिश्रणले नमकको गठन गर्नेछ।
वजन हानि कैप्सूल
कैप्सूल सबै भन्दा सामान्य तरिका हो सिबूत्रामिन एचसीएल लिइयो। तिनीहरू 10MG, 15MG, र 5MG मा प्याकेज गरिएका छन्। यो औषधि लिनको लागि यो सबैभन्दा सरल तरिका हो। The सिबूत्रामिन एचसीएलक्याप्सूल बनाउँदा अन्य अवयवहरूसँग संयुक्त हुन सक्छ। यी हुन्; स्टार्च, ग्लूकोज, लेक्टोज, आदि। यो सुनिश्चित गर्नका लागि ट्याब्लेट निर्मित प्रभावकारी बनाउन को लागी एक वायुमण्डल द्रुत हुने उपकरण सिफारिस गरिएको छ कि प्रयोगको शुद्ध सामाग्री निर्दिष्ट मान हो। मकई र अन्य सबै सहायक उपकरणहरू राम्ररी मिल्दो छन् भन्ने सुनिश्चित गर्न मेक्सिको मिक्सिंग उपकरण उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ।
सिबूत्रामिन एचसीएल कफी
यो कफी एक पेय हो जसले वजन घटाउँछ। सिबुट्रामिन एचसीएल अन्य सामाग्री संग पतला कफी बनाउन को लागि तत्काल कफी संग मिश्रित छ। यो एक धेरै सुविधाजनक विधि हो किनभने यो सामान्य कफी जस्तै लिइएको छ, तर मात्र फरक छ कि यसले वजन घटाने औषधि समावेश गर्दछ। राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न प्रत्येक दिन पनि लिन सकिन्छ। तपाई यसलाई कसरी बनाउनुहुन्छ? यसलाई पानी संग मिलाउनुहोस् र नाश्ता गर्नु भन्दा पहिले पन्ध्र मिनेटमा पिउदिनुहोस्।
Sibutramine एचसीएल स्लिमिङ कफी धेरै उपयोगी छ किनभने यसले शरीरको समग्र शारीरिक प्रदर्शनलाई प्रोत्साहित गर्छ। यसले शरीरलाई थप ऊर्जा उत्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउँछ। धेरै शाकाहारीहरू वा भेग आहारमा मानिसहरू यसको लागि जान्छन् किनभने यो सजिलै आफ्नो कार्यक्रममा समावेश हुन सक्छ। स्लिमिङ कफीले भूख दमनको माध्यमबाट खाद्य सेवन नियन्त्रण गर्छ; यो भावनात्मक खानेकुराको लागि धेरै उपयुक्त हुनेछ। यसले निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्दा वजन घटाने र शरीर टोनिंगमा मद्दत गर्दछ। धेरै मान्छे यो एक राम्रो विकल्प हुन मानिन्छ किनकि यो अतिरिक्त पाउन्ड बहादु गर्न मद्दतको रूपमा जान्दछन् जब तपाईं आफ्नो कफी पिप जारी राख्नुहुन्छ।
तपाईंको जीवनमा सिबुट्रामिन एचसीएल ल्याउनुहोस् र तपाईंको वजन घटाने योजना सुरु गर्नुहोस्!
यदि तपाईंलाई केहि पाउन्ड हराउन आवश्यक छ भने, सिब्युटेरिन एचसीएलले तपाइँलाई ढाकेको छ। न केवल यो वजन कम गर्न मद्दत गर्दछ तर यो एक लामो अवधिको विधि हो किनभने यो हराएका वोसको पुन: प्राप्त गर्न रोक्छ। यद्यपि, यसका लागि सफलताको लागि, तपाईंले सिब्युट्रिन एचसीएल लिनु अघि र पछि के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा केहि बिन्दुहरूलाई ध्यान दिन आवश्यक छ।
सेबुत्र्रमिन एचसीएल लिनु अघि
एकपटक तपाईंले सिब्युट्रामिन एचसीएल लिने निर्णय गरेपछि, तपाइँले एक हेल्थकेयर प्रदायक पहिलो पटक हेर्नु पर्छ। यस तरिका, तपाईं सुरक्षित पक्ष मा हुनेछ। तपाईंले उहाँलाई दिनुभएको जानकारीको माध्यमबाट, उहाँले बताउन सक्षम हुनेछ कि तपाई औषधी लिन वा छैन। तपाईंले औषधिसँग सम्भावनाको सम्भावनालाई विचार गर्नुपर्दछ, तपाईं सम्भावित साइड इफेक्ट र तपाइँको स्वास्थ्य इतिहास।
तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको काउन्टर वा पर्चे दबाउने कुनै पनि कुरा बताउनुहोस्। यो माइग्रेन सिरिया दुखाइको औषधि, न्युनिकल दुखाइ औषधि, एलर्जी वा चिसो औषधि र एन्डिड्रेष्ट्टहरू पनि समावेश गर्नुपर्छ। यो पनि तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण छ कि यदि तपाइँ जडीबुटी वा भिटामिन लिनु भएको छ।
यदि तपाईले कुनै पनि एमओओ अवरोधक लिनु भएको छ भने तपाईलाई यो कुरा गर्न आवश्यक छ कि ट्रान्सिलकोप्रोमिनन (पेनाटेट), सेगुलेलिइन (एल्डप्रील, एम्म्स), रसाएगिलाइन (एजिलिएट), फिनेजेजाइन (नर्डिल), आइसारबक्सजेजिड (मार्प्लान), फुरजोसोनोन (फरूक्सोन) बितेका चार दिन यदि तपाईले कुनै पनि लिनुभयो भने, तपाई सिब्युट्रमिन एचसीएल लिनदेखि जोगिन नसक्नु जब सम्म यो तपाइँको शरीरमा छरिएको छैन किनभने यसले तपाईंको शरीरमा जीवन-धम्कीपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।
यदि तपाईं यसमा एलर्जी हुनुहुन्छ वा निम्न अवस्थाहरू छन् भने तपाईले सिबुट्रामिन एचसीएल लिनु हुँदैन;
bulimia वा anorexiadisorders।
तपाईं अतीतमा कोरोनरी धमनी रोगबाट पीडित छन्।
कुनै उत्तेजना आहार गोलहरू लिँदै।
तपाईंले अतीतमा एक स्ट्रोक वा हृदयघातको सामना गर्नु भएको छ।
तपाईंसँग अनियन्त्रित वा गम्भीर उच्च रक्तचाप (उच्च रक्तचाप) छ .यो किनकी मध्यस्थ-अभिनयको केहि वजन घटाने औषधि जसले तंत्रिका टर्मिनलहरूबाट serotonin को रिहाईको लागि नेतृत्व गर्दछ हाइपरटेन्सनमा योगदान गर्न संदिग्ध गरिएको छ।
अतीतमा कुनै हृदय विकारको सामना गर्नु पर्यो (हृदय लय विकार वा कोजेस्टेक हृदय विफलता)।
यदि तपाइँसँग निम्न सर्तहरू भएको छ भने, तपाइँलाई दिइएका खुट्टा समायोजन गर्न सकिन्छ, वा विशेष जाँच गरिएका परीक्षणहरू।
साठ साढे वर्ष भन्दा धेरै वर्ष वा सो भन्दा कम।
तपाईंसँग ग्यालस्टोनको इतिहास छ। वजन घटाने गेलस्टोनको गठन बुझ्न जान्छ।
तपाईं रक्त क्लटिंग वा ब्लिडिंग विकार पीडित हुनुहुन्छ। प्लेटलेटलेट प्रकार्य वा हेमोस्टासिसलाई प्रभाव पार्ने गर्भनिरोधक औषधि प्रयोग गरेर सबैलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ।
एक पर्ची वा एडिसीपी विकार छ। जब तपाईं विकास गर्ने क्रममा सिब्युटेरिन एचसीएलको प्रयोग रोक्न सकिन्छ।
तपाईं कम प्रभावशाली थाइरोइबाट पीडित हुनुहुन्छ।
यदि तपाईं अवसादबाट पीडित हुनुहुन्छ भने।
गुर्दे रोग छ। कसैलाई हल्का र मध्यम गुर्दे समस्याले पीडित हुनु पर्छ साबुत्रमिन एचसीएल सावधानी संग। ती व्यक्तिहरूले गम्भीर गुर्दाको हानीको साथ वा जो डायलिसिसनमा छन् भने अन्त्य-चरणको गुर्दा रोगको कारणले यसलाई कहिल्यै लिन सक्दैन।
यदि तपाईं जिगर रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ भने। अध्ययन सिब्युटेराइन एचसीएलको प्रभावमा अझैसम्म गरिएको छैन, र तपाईले यो सल्लाह दिएका छन् कि यसलाई प्रयोग गर्न नसक्ने।
तपाईंसँग उच्च रक्तचाप छ।
तपाईं ग्लूकोमाबाट पीडित हुनुहुन्छ। सिबुत्रामिन एचसीएलले गर्दा माइडियसिस हुन सक्छ।
यो अझै थाहा छैन कि क्या सिब्रामामिन एचसीएलले गर्भावस्थालाई असर गर्छ र यो हो, त्यसकारण बुद्धिमानी छ कि यदि तपाई अपेक्षाकृत हुनुहुन्छ वा सिब्युटेरिन एचसीएलमा हुँदा गर्भवती हुने योजना बनाउनु हुन्छ। सिबुट्रामिन एचसीएलले गर्भ निरोधक क्षमतालाई परिवर्तन गर्दैन।
तपाईंको सानो हानिकारक हानिबाट बच्न, चिकित्सकलाई के भन्नुहुन्छ कि तपाई स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ भने अहिले सम्म थाहा छैन कि यदि सिबुट्रामिन एचसीएल मासु दूध मार्फत नर्सिङ बच्चालाई पारित गर्न सकिन्छ। सोह्र वर्षको उमेरमा जो कोहीले यो औषधि लिनु हुँदैन।
यदि तपाइँ प्रायजसो कुनै औषधि प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई डोऱ्याइले प्रयोग गर्दछ (जस्तै डराउन, डिप्रेसन, साइजहरू, मांसपेशी आराम, सुत्ने गोलहरू, न्युनिकल दुखाइ औषधि, सिटिभेटिभ, र एलर्जी वा चिसो औषधि)। यस औषधिको प्रयोगमा थप्नुहोस् सिबुत्रामिन एचसीएलको कारणले सुन्तला
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाई वास्तविक सिब्युट्रिन एचसीएल खरीद गर्नुहोस् राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न। Phcoker.com मा हामी तपाईंलाई प्रामाणिक सिब्युट्रिन एचसीएल लाई आपूर्ति गर्न समर्पित छौं जुन तपाईं चाँडो वजन कम गर्न सहयोग गर्न एक लामो बाटो जान्छ।
जबकि सिबूत्रामिन एचसीएल लिदै
एकपटक डाक्टरले पत्ता लगाएपछि तपाइँ औषधि प्रयोग गर्न योग्य हुनुहुन्छ र खुवावट दिनुहुन्छ, तपाइँलाई धार्मिक दिईएका निर्देशनहरू पछ्याउनु पर्छ। निर्दिष्ट गरिएको भन्दा ठूलो वा सानो रकम लिनु नदिनुहोस्। दृढताले उछिनेको दुरुपयोग गर्न मद्दत गर्दछ।
Sibutramine एचसीएल खुराक दैनिक एक पल्ट औषधि ले रहयो छ जब सम्म तपाईं आफ्नो इच्छित वजन सम्म पुग्नुहोस। तथापि, तपाईंको चिकित्सकले तपाइँको वजनमा परिवर्तनहरू विचार गरिरहेको खुट्टा समायोजन गर्न सक्छ। यसले तपाईंलाई सुधारिएको परिणामहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
तपाईं चिन्ता गर्नुपर्दैन यदि तपाईंले कुनै खाना लिनुभएको छैन र तपाईंको औषधि लिनको लागि समय हो। सिबेट्रामिन एचसीएल पूर्ण वा खाली पेटमा लिन सकिन्छ।
Sibutramine एचसीएल लिन को लागी सबै भन्दा राम्रो भाग हो कि यो कम कैलोरी आहार संग संयुक्त को पहिलो चार हफ्तों को भित्र, तपाईं कम से कम चार पाउंड खोना चाहिए। यदि तपाईंले चार हप्ता भित्र चार पाउन्ड बसाल्नुभएन भने, तपाईंले यसको बारेमा आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुपर्छ।
सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं प्राय: तपाईंको पल्स र रक्तचाप जाँच गर्न डाक्टरको भ्रमण गर्नुहोस्। यदि उहाँले कुनै असामान्य परिवर्तनहरू सूचित गर्नुभयो भने, सिबुट्रामिन एचसीएल तपाईंको लागि होइन। यो ड्रग मात्र अधिकतम दुई वर्ष लाग्न सक्छ, तर यसलाई दुई वर्ष भन्दा बढी लाग्ने प्रभावलाई अझै थाहा छैन।
Sibutramine एचसीएल खाद्य र शराब अन्तरक्रिया - सिबुट्रामिन एचसीएलले शराबसँग संयुक्त हुन सक्छ कि तपाइँ हृदयगत प्रभावहरू जस्तै रक्तचाप परिवर्तनहरू, छातीको दुखाइ र हृदयको दरमा वृद्धि हुनसक्दछ। तपाईं एकाग्रता, अवसाद, डोजोपन, र चक्करपन को कमी जस्तै तंत्रिका तंत्र प्रभाव देखि ग्रस्त हुन सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो परिवारलाई ड्राइभ गर्ने वा धेरै ध्यान दिन सक्ने केहि पनि गर्न योजना बनाउनु हुन्छ भने, तपाईलाई थप सावधान हुनु आवश्यक छ किनकी सिब्रुबेराइन एचसीएलले तपाइँको सोच, निर्णय र मोटर कौशललाई असर पार्न सक्छ।
साथै, पहिले नै तपाइँको डाक्टरसँग परामर्श नगरी काउंटर वा नुहाउने वजन घटानेको औषधीमा कुनै पनि अन्य लिने काम नगर्नुहोस्। सिब्युट्रामिन एचसीएल लिदै गर्दा एलर्जी, चिसो वा खाँटीको उपचार गर्ने औषधहरू पनि रोक्नै पर्छ। Ipamorelin लाभ र इम्पोरेलिन प्रयोग मा मार्गदर्शन
तपाईंको खुट्टा लिनको लागि बिर्सनु सामान्य छ, र यसले तपाईंलाई चिन्तित बनाउन हुँदैन। तपाईंले चाँडै यो सूचना दिनुभएको छ जस्तो गर्नुहोस्। तथापि, तपाईलाई छोड्नुहोस् यदि तपाईको अर्को खुट्टा लिने लगभग समय हो। कुनै पनि खुराकको लागि बनाउनुको उद्देश्य संग अतिरिक्त गोली नदिनुहोस् जुन तपाईंले छोड्नुभयो।
पछि सिबूत्रामिन एचसीएल लिदै
तपाईंले आफूलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईंले सिब्युट्रमिन एचसीएल लिनुअघि कुनै पनि वजन गुमाउनु भएको छ कि छैन। यो बुझ्न योग्य छ! तपाईले सल्लाह दिएका छन् कि तपाईलाई जाँच गर्नु पर्ने पहिलो कुरा कुनै एलर्जी प्रतिक्रियाको विकास हो। यदि तपाईंले कुनै पनि पाङ्ग्राहरू, दाँत वा अन्य असामान्य शरीर परिवर्तनहरू देख्नुहुन्छ भने तुरुन्त डाक्टरको ध्यान खोज्नुहोस्।
तपाईंको डाक्टरलाई सल्लाह दिनुहोस् यदि तपाईंलाई कुनै पनि आहार गोलियाँ, खाँसी औषधि र decongestants लाई लिन आवश्यक छ। अरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ औषधिहरू बच्चाहरूको पहुँचबाट बाहिर राख्नुहुन्छ। छोराछोरीहरू छुट्याउन सक्छन्, र यसले आफैलाई जहर जोगाउन मद्दत गर्नेछ। यदि उनी औषधिसँग सम्पर्कमा हुन्छन् भने, बच्चाहरूलाई तुरुन्तै कोठामा लिनुहोस्।
तपाईलाई सल्लाह दिइयो कि यो औषधी कसैको साथमा साझा गर्न नसक्ने हो। हामी सबैलाई थाहा छ कि केहि साथी जो वजन मा समस्याहरु देखि ग्रस्त हुन सक्छन् हुन सक्छ। यसलाई अन्य व्यक्तिको नजरबाट टाढा राख्न सक्नुहुनेछ तपाईलाई एकदम राम्रो सम्झौता। औषधि मात्र निर्धारित उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ।
एक क्षेत्रमा सिबुट्रामिन एचसीएल स्टोर गर्नुहोस् जुन कोठाको तापमान (25 डिग्री वा 77 फरेनहाइट) छ र त्यो हल्का, ताप, र नमीबाट टाढा छ।
शौचालय वा नालीमा दबाइहरू दुर्व्यवहार नगर्नुहोस् किनभने तिनीहरू एक संक्रामक हुन सक्छ। यदि सिबुत्रामिन एचसीएलबाट छुटकारा पाउन आवश्यक छ भने सल्लाहको लागि डाक्टरलाई सोध्नुहोस्।
सिबुट्रामिन एचसीएल साइड इफेक्ट
यदि तपाईं निम्न निम्नलिखित एलर्जी प्रतिक्रियाहरू विकास गर्नुहुन्छ भने, तुरुन्तै चिकित्सकीय ध्यान खोज्नुहोस्।
यदि तपाईंको गला, जिब्रो, होंठ र अनुहार चिन्ता हुन्छ भने।
यदि तपाईं सास फेर्न गाह्रो हुन्छ।
कमजोर वा सुँगुर लगाउँदा (विशेष गरी एक पक्षमा)।
छाती दुखाइ वा भारी भावना। दुखाइ क्यान्सर वा हातमा फैलिएको हुन सक्छ र सामान्यतया बीमार हुन सक्छ।
धेरै उच्च रक्तचाप (पर्दा, चिन्ता, कान बज्जिंग, धमिलो दृष्टि, र गम्भीर सिरदर्द)।
सजिलो रगत पिउने वा चोट लगाउने (ब्लीडिंग गम, नाक वा कुनै पनि निरन्तर रक्तचाप)।
जस्तै तपाईं लगभग बित्दै हुनुहुन्छ।
अत्यधिक पसीना, उच्च बुखार, भ्रम, र कठोर मांसपेशिहरु।
बिस्तारै विद्यार्थीहरू, समन्वयको हानि, दस्त, उल्टी, नली, अधिकृत रिफ्लेक्स, थोरै, बुखार, भित्ता र आलोचना।
सांसको छोटो अनुभव जुन नयाँ वा बिग्रेको छ।
असिन, तेज या दिल दिलबारी।
घट्यो / बढि लाइबेरिया, ऊर्ध्वाधर, चिसोहरू।
क्षणिक ischemic हमला।
वाणी विकार, छोटो-पटक मेमोरी हानि।
गिल्स डी ला ट्रोटेट सिंड्रोम।
असामान्य सपनाहरु, असामान्य चीज, andcerebrovascular दुर्घटना।
कम गम्भीर साइड इफेक्ट
हल्का छाला रैश।
सुत्दा बेला समस्या (अनिवार्य)।
तपाईंको छालाको मुनिको भावना, लाडो वा गर्मी।
खाँसी, गले गला, भरपूर वा डुङ्गाको नाक, र कुनै पनि फ्लू लक्षणहरू।
उदास, तंत्रिका वा चक्कु महसुस गर्दै।
संयुक्त दुखाइ, पीडाको दुखाइ वा टाउको दुखाइ।
पेट दुख्ने र कब्ज।
भूटानमा परिवर्तनहरू अनुभव गर्दै।
पेट अफसेट गर्नुहोस्।
तिनीहरू पनि सामान्य, अनावश्यक र दुर्लभ रूपमा वर्गीकृत गर्न सक्थे।
कम गम्भीर अभिव्यक्तिको साथ-सीनिकल समस्या निद्रा, घर्षण, भूखानको हानि, नाकको सुगन्ध, टाउको दुख्ने, चिन्तित महसुस, सजिलै कष्टग्रस्त वा रिस उठाउनुपर्दछ, सुक्खा मुख, चक्कर र कब्जानुपर्छ।
अनावश्यक साइड इफेक्ट
कडा अभिव्यक्ति संग- हेर्न योग्य जल अवधारणा, पीडाको दुखाइ, उच्च रक्तचाप, हृदय पीडित वा धम्की, फ्लू-लक्षणहरू, तेज हृदयघात, अवसाद, र असामान्य लिभर प्रकार्य परीक्षणहरू।
कम गम्भीर अभिव्यक्तिको साथ- रक्त वाहिकाहरु, गला जलन को चौडाई, स्वाद को समस्या, पेट दुखाइ, साइनस जलन र भित्रीता, झिंगलिंग र नम्रता, संयुक्त दुखाइ, भित्री, भूख वृद्धि भयो। यो पनि तपाईंलाई कमजोर महसुस गर्न सक्छ, फेंकता (चिसो), अत्यधिक तिर्खा, अत्यधिक पसीना, डोजोपन, दस्त, र ब्याकसस जस्तै महसुस।
एक गंभीर अभिव्यक्ति संग - मूत्र परिवर्तन, माइग्रेन सिरदर्द, जीवन-धम्कीको एलर्जी प्रतिक्रिया, अन्तर्वार्तात्मक नेफ्रिटी, ग्लूडडर को सूजन, अरोन पथ संक्रमण, संकट संकट, क्षणिक ischemic हमला, स्ट्रोक, serotonin सिंड्रोम, बरामद, रश, मनोविज्ञान, न्यूरोलिप्टिक घातक सिंड्रोम, मूड परिवर्तन, माइग्रेन सिरदर्द, रक्तचापको जोखिम, हृदयघातको जोखिम बढ्यो, आत्महत्याका विचारहरू, रक्त प्लेटलेट, पुरानो हृदय विफलता, छातीको दुखाइ, पेट दुख्ने र एट्रियल फाइब्रिलेशनमा कमी आएको छ।
कम गम्भीर अभिव्यक्तिको साथ-
खमीर संक्रमणो भल्पा र योनि।
प्रभावकारी थाइरोइड ग्रंथि
गहिरो दुखाइ, मांसपेशी दुखाइ
भ्वाइस बक्सको सूजन
दमन को कवर को सूजन
उच्च रक्त शर्करा, छालाको तल ब्लिडिंग
ग्याँस, बुखार, खाँसी, भ्रम
विचारहरू फोकस गर्न सक्षम छैन, ब्रोंकाइटिस, रक्तचाप जो अवधि संग सम्बन्धित छैन।
अत्यधिक क्रियाकलाप र उत्साह को साथ व्यवहार, एनीमिया
यौन संक्रामक सम्बन्धमा परिवर्तन गरिएको ब्याज, असामान्य रूपमा हिँड्ने।
मांसपेशी टोन मा असामान्य ग्रोथ र अजीब सपनाहरु रहयो।
रिपोर्ट गरिएको छ overdosing मा धेरै कम रिपोर्टहरू छन्। Sibutramine एचसीएल overdosage संग शामिल सबै भन्दा अक्सर प्रभाव चकलेट, सिरदर्द, उच्च रक्तचाप, र tachycardia हुन्। यो पनि घातक हुन सक्छ, र तपाईले भर्खरै चिकित्सकीय ध्यान खोज्न सल्लाह दिएका छन्। चिकित्सकले पर्याप्त जानकारी पाउन सक्छ कि तपाईसँग लेबल, कन्टेनर वा बक्स खरिद गर्नुहोस्।
यदि तपाईले म्याग्दीको सिब्राम्रामिन एचसीएलको एक खुराक लिनुभयो भने, यो प्रायः सम्भवतपाईँले तपाईलाई समस्याको कारण हुनेछैन। यद्यपि, दिमागको केहि शान्तिको लागि, तपाईं एक स्वास्थ्य प्रदायकसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंलाई कमजोर वा बेवास्ता छ भने, तुरुन्त डाक्टरको सल्लाह खोज्नुहोस्। तपाईलाई सधैं औषधिको समाप्ति मिति जाँच गर्नु अघि यो लिनु अघि सल्लाह दिइन्छ किनभने म्याद समाप्त भएको औषधि प्रभावकारी छ। यदि उनीहरूको समयावधिको म्याद सकियो भने उनीहरूको प्रतिस्थापन हुन्छ।
Sibutramine एचसीएल FAQs
एक स्तनपान आमाले सिब्रु्रामिन एचसीएल लिन सक्दछन्?
के सिब्रामामिन एचसीएल गर्भवती महिलाको लागि प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
तपाइँलाई चिकित्सकसँग केस-विशिष्ट सिफारिसका लागि छलफल गर्न सुझाव दिइएको छ।
के एक सिब्युट्रामिन एचसीएल लिन सक्छ र ड्राइभ गर्न सक्छ?
केहि साइड इफेक्ट्स जो सिब्युटेरिन एचसीएल संग आउछ एक टाउको दुखाइ, उच्च रक्तचाप, चक्करपेशी, र चपलतापन हो। यदि तपाइँ यो अनुभव गर्नुहुन्छ भने, यो भारी मशीनरी वा ड्राइभ सञ्चालन गर्न सुरक्षित छैन।
अल्कोहल बनाउन सक्छ किन शराब लिनदेखि बच्नुहोस्। यदि तपाईँसँग यस्तो चिन्ताको सम्बन्ध छ भने, तपाईले तपाईको विशेष स्वास्थ्य र शरीरका सर्तहरूको सन्दर्भमा सधैँ सिफारिसका लागि डाक्टरको सल्लाह खोज्नुपर्छ।
यदि म सिब्युट्रामिन एचसीएल रोक्न छनौट गर्छु, के म यसलाई तुरुन्तै रोक्न सक्छु या म यसलाई बिस्तारै गर्छु जबसम्म शरीरले यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ?
यस सन्दर्भमा आफ्नो चिकित्सकलाई परामर्श गर्नुहोस्।
के सिब्रामामिन एचसीएल नशे की लत हो या यो आदत बनाउन सक्छ?
सम्भावित लतको साथ धेरै औषधिहरू आउँदा, तपाईंसँग यसको बारेमा आफ्नो चिकित्सकलाई परामर्श गर्न आवश्यक छ। साथै, तपाईंले आत्म-दबाइबाट बच्नु पर्छ कि अन्यथा डाक्टरको परामर्श बिना औषधिमा शरीर निर्भरता बढाउनु पर्छ।
Sibutramine एचसीएल समीक्षाहरू
सिबुट्रामिन एचसीएल को धेरै ग्राहकहरु को लागी छुआयो जो यसलाई प्रयोग गरेको छ। यसको सकारात्मक ग्राहक प्रतिक्रिया एक ब्रान्ड सिर्जना गर्न एक लामो बाटो गयो।
Zachary भन्छन् कि अब सम्म दुई हफ्तों को लागि सिब्यूट्रामिन एचसीएल को उपयोग पछि सम्म 15 पाउंडहरु लाई हरायो छ। उनी भन्छन् "मैले केही समयको लागि मोटापेटीको साथ संघर्ष गरेको छु र तपाईले सम्भवतः सोच्न सक्नुहुने सबै प्रकारका वजन घटाने कार्यक्रमहरू प्रयोग गरेको छु। मेरो वजन कम गर्ने सपना जस्तो लाग्यो कि जस्तो लाग्यो र मलाई दिदीको कगारमा थियो। खानाको लागि मेरो प्रेम र व्यायाम गर्ने प्रशंसक हुनुहुँदैन। नमकलाई चोट लाग्यो। वजन दिनको दिन पिलिङ्ग भएको थियो, र अस्पतालको भ्रमणले दिन बढ्यो। मेरो रक्तचाप बढ्दै गयो, र मेरो वजनले मेरो जूतालाई बाँध्न अनुमति दिन सकेन। मेरो साथी जेसिका मेरो परिस्थितिको बारेमा थाहा नभएसम्म सिबुत्र्रमिन एचसीएल औषधिको लागि सिफारिश गरे। हे केटा! म उडेको छु। यसले खानाको सानो भाग लिन मद्दत गरेको छ। साथै, यसले फास्ट फूडहरू विशेष गरी पिज्जा खाएको इच्छालाई कम पारिएको छ जुन म दैनिक लिइरहेको छ। केवल दुई हप्ताको लागि मैले 15 पाउन्ड हराएको छु, र म अहिले 186 पाउन्ड हुँ। म यो यात्राको साथ पनि रमाइलो छु। यदि तपाईंले वजन घटाने वाला औषधिमा चासो राख्नुहुन्छ भने, तपाईले सिब्युट्रामिन एचसीएल लिने विचार गर्नुपर्दछ। "
चीनबाट फेंग भन्छिन् कि सिबुत्र्रमिन एचसीएलले हरेक दिन उनीहरूको मनमा उठाए। उनले भने, "यो मेरो दिन सुरू गर्ने उत्तम तरीका बनिरहेको छ किनभने हरेक पटक मैले यसलाई लिन्छु, मलाई बढ्दै छ। मैले दिनको सामना गर्न अधिक ऊर्जा पाएको छु कि मैले केहि पाउन्ड गुमाएँ। मेरा सहकर्मीहरूले मलाई बताउँछन् कि म काममा म पनि सक्रिय हुँ! "
चेन भन्छन् कि उनले वजनको एक महत्वपूर्ण मात्रा गुमाएका छन्। उनले भन्छिन् "म दुई महिनामा 120 पाउन्डबाट 135 पाउन्डमा छु। म खुसी छु किनभने म अब मेरो सपना गाउनमा फिट गर्न सक्दिन। मेरो श्रीमानले सधै मलाई केही वजन गुमाउन प्रोत्साहित गरेको छ, र सिब्युबेराइन एचसीएलले मेरो लागि काम गरेको छ "।
डेभीड भन्छन् कि उनको cravings चले गए, र अब स्वच्छ खाना मा छ।
क्रिस्टीन सिब्युट्रामिन एचसीएलको उद्धारकर्ता भन्दा बढी छ। तिनी भन्छिन् "मेरो दोस्रो गर्भावस्था पछि, मेरो वजन दुग्ध भयो। मैले हरेक पटक स्तनपान गर्न खोजेको छु, व्यायाम गर्दैछु तर सबैले व्यर्थ लगिरहेको जस्तो देखिन्छ। मैले केही समयअघि सिब्युट्रामिन एचसीएलको लागि आदेश दिएँ र स्तनपान गर्न रोकियो। मेरो वजन सामान्य हुन्छ। मेरा सबै साथीहरूले मलाई बताउछ कि मैले पछिल्लो वर्ष जन्म दिए जस्तो देखिनँ। मेरो पेट कम भएको छ, र म अहिले सानो देखिन्छु। Sibutramine एचसीएलले मलाई सबै खराब चीजहरूबाट बचाउनुभएको छ जुन मैले आफ्नो शरीरलाई वजन कम गर्न बोलीमा गरे। धन्यवाद Sibutramine एचसीएल! "
लिला भन्छिन् कि उनको छोरो जवान हुँदा उनको छोरा मोटापेड भएको छ। उहाँ स्कूलमा धम्की दिनुभएको छ, र यसले उसलाई त्यस्तो खराब प्रदर्शन गर्यो। यद्यपि अब उनी सातौं वर्षमा छन्, लीलाले उनलाई जन्मदिनको रूपमा कैप्सूल दिए, र उहाँले अहिलेसम्म 20 पाउन्ड भन्दा बढी गुमाउनु भएको छ। "मेरो कहिल्यै मुस्किल, ऊर्जावान छोरा पर्याप्त पर्याप्त Sibutramine एचसीएल धन्यवाद गर्न सक्दैन; उहाँ अहिले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न समर्पित हुनुहुन्छ। "
कुम भन्छन् "मेरो मोडलिंग क्यारियर राम्रो छ। केवल अर्को दिन म मेरो स्कूलको लागी मोडेल पनि योग्य हुन सक्दिन। तर आज मैले आवश्यक पर्ने सबै वजन गुमाएको छु र अर्को हप्ता साक्षात्कारमा भाग लिने को लागी निमन्त्रणा दिइनेछ। Sibutramine एचसीएल ले विशेष गरी पेट को आसपास अतिरिक्त वसा संग दूर गर्न को लागि मदद गरेको छ। मेरो आंकडा मर्न चाहन्छु, र म अब संसारको सम्झना भइरहेको छु। "
रङ भन्छिन् कि उनले छ महिनामा आठ पाउन्ड हराए। "म वजन घटाने उत्पादनको बारेमा धेरै अचम्म लाग्दो थियो तर अब। वजन कम गर्न चाहने कुनै पनि सिब्युट्रमिन एचसीएल ले तुरुन्तै लिनु पर्छ। यसले परिणाम दिन्छ तपाईंको अपेक्षा भन्दा बाहिर छन्। मैले गत छ महिनामा अस्वास्थ्य पाउनुपरेको छु। "
Sibutramine एचसीएल मूल्यहरु
विभिन्न बिक्रेताहरूले विभिन्न मूल्यहरूमा सिबुट्रिनाइन एचसीएल बेच्छन्। यहाँ नमूना देखाइएको छ कि कतिपय सिब्युट्राइनइन एचसीएल मा बेचीन्छ।
ट्याबलेटहरूको छैन वजन कुल खर्च प्रति ट्याब्लेट लागत
180 क्याप्सुल 15mg $ 420 $ 2.33 प्रति गोली
30 क्याप्सुल 10mg $ 129 $ 4.3 प्रति गोली
90 क्याप्सुल 10 मिलीग्राम $ 240 $ 2.7 प्रति गोली
कसरी किन्ने वास्तविक Sibutramine एचसीएल अनलाइन
यदि तपाईं सोच रहे हो कि सिबुत्र्रमिन एचसीएल को खरीद गर्न को लागि, तब तपाईं यसलाई अनलाइन खरीद गर्न विचार गर्न सक्छन्। न केवल यसले तपाईंलाई शारीरिक पसल खोजेको परेशानीलाई बचत गर्नेछ तर तपाईलाई निश्चित छ कि यो उत्पादन तपाईंको समयमा तपाईलाई यात्रा समय बचत गर्न तुरुन्तै सही हुनेछ। अनलाईन स्टोरको खोजी गर्दा खोजी गर्दा, तपाईंले एक रोज्नु पर्छ कि तपाइँलाई उत्कृष्ट सेवा सुविधाको सुविधा र खरीद प्रक्रियाको दौरान केहि मनको शान्ति प्रदान गर्नुपर्नेछ।
साथै साइटको खोजी गर्नुहोस् जुन उच्च गुणस्तरको उत्पादनहरू उद्धार गर्दछ। तर तिमीलाई कसरी थाहा छ? अनलाइन साइट खोजी गरेर र पढ्नु भनेको अरु व्यक्तिले के गर्नु पर्छ। एकपटक तपाईं संतोषजनक समीक्षाहरू भएपछि, तपाईं आफ्नो खरिदको साथ अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। यस तरिका, तपाईं निश्चित हुनेछ कि तपाईं अनियमित, शुद्ध ड्रगहरू खरीद गर्नुहुन्छ।
एक साइट खोज्नुहोस् जुन सुरक्षित र छिटो वितरण प्रदान गर्दछ। सम्पूर्ण तीन महिनाको लागि डिलिवरीको लागि पर्खाइ बिस्तारै असुविधा हुन सक्छ। तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ कि तीन महिना भित्र तपाईले एकजना पाउन्ड हराउनु भयो। यसबाहेक, तपाईं आफ्नो क्याप्सुल टुक्रा टुक्राहरू मार्न चाहनुहुन्न। तपाईंले निपटनु भएको साइटले तपाइँलाई तपाइँको दबाइको साथ अझ छिटो डिलिवरी प्रदान गर्न सक्षम हुनु पर्दछ।
साइटको लागि जानुहोस् जुन शीर्ष-नोक सेवा संग प्रदान गर्दछ। न केवल एक जो अनुकूल छ जब तपाईं किन्न चाहानुहुन्छ तर बिक्री सेवा पछि दिइने को लागी एक मात्र हो। अन्तमा, एक साइट जो ग्राहकलाई प्रतिक्रियात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिईएको हो। कुनै पनि ग्राहकलाई उनीहरूको इमेल वा कलहरू बेवास्ता गरे भन्दा बढी ग्राहकलाई र्क। एक साइट चयन गर्नाले ग्राहकको प्रतिक्रियालाई मान्दछ कि तपाईंले सजिलै संग आफ्नो चिन्ता सुन्न सक्नुहुने उत्पादनको बारेमा यो एक गुनासो वा सिफारिश हो।
साइटको लागि सबै माथिको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ, Phcoker.com ले चाल गर्नेछ। हाम्रो साइटमा खरिद गर्दा तपाईले पूरा दिन, केही चरणहरू लिन सक्नुहुने छैन र तपाईं अब तपाइँको डिलीवरीको लागी कुनै पनि चिन्ता बिना प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले के गर्नुभयो यहाँ हुनुहुन्छ;
शब्द "सिबेट्रामिन एचसीएल" खोज्नुहोस्।
एक पटक तपाईंको अर्डर अनुमोदित भएपछि, तपाइँ अब सर्वोच्च साधनहरू प्रयोग गरेर भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ, र एक पटक यो पुष्टि भएपछि, माल तुरुन्तै पठाइएको छ। तपाईंको स्थानले ट्रांजिटमा हुने समयको मात्रा निर्धारण गर्नेछ।
सिबुट्रामिन एचसीएल आपूर्तिकर्ता / निर्माता
Xuchang Shangke रासायनिक कं, लिमिटेड Phcoker को रूप मा पहचाना, एक अग्रणी चीन आधारित उद्यम है कि विनिर्माण, बाजार और सक्रिय दवा दवा मध्यवर्ती और उत्पादों को वितरित करता है, जिसमें Sibutramine एचसीएल शामिल है। हामी असाधारण गुणस्तर र किफायती उत्पादनहरू प्रदान गर्दछौं जुन हाम्रो ग्राहकहरूको आवश्यकतालाई पूरा गर्न उद्देश्यको साथ आफ्नो अपेक्षाहरु बाहिर जान्छ। त्यसोभए हामी के भन्छौं?
हाम्रा सबै उत्पादनहरू गुणवत्ताको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरहरू पूरा गर्छन्। साथै, यो सबै प्रासंगिक विधायी र नियामक आवश्यकताहरु संग लागू हुन्छ जुन औषधिका उत्पादनमा लागू हुन्छ। यदि तपाईं व्यक्तिको प्रकार हो कि गुणस्तरको लागि जान्छ भने, तपाईं सही ठाउँमा हुनुहुन्छ।
हाम्रो कर्मचारीहरू राम्ररी सिकेका छन् र औषधि क्षेत्रमा एक विशाल अनुभव छ। हामी तिनीहरूलाई सधैं राम्रो काम गर्ने अभ्यासहरू अपनाउने प्रोत्साहन गरेर तिनीहरूको प्रदर्शन र कल्याण सुधार गर्न जारी राख्छ। उनीहरूले व्यक्तिगत विकासलाई प्रवर्धन गर्न कहिलेकाहीँ प्रशिक्षित गरिन्छ। यसबाहेक, हामीले सधैं काम गर्ने वातावरण, सुरक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा चिन्ता सुनिश्चित गर्नका लागि कर्मचारीहरू र प्रशासन बीच संचारको लागि आवश्यक उपकरणहरू प्रदान गरेको छ।
हामी राम्रो तरिकाले सुसज्जित र आधुनिक प्रयोगशालाहरूमा घृणा गर्दछौं जुन हामीले अत्याधुनिक उत्पादनहरू उपलब्ध गराउन निराश पारेको छैनौं। उत्कृष्ट गुणस्तरको उपकरण जसले हामी प्रयोग गर्दछ बोनस हो।
हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुखद र छिटोको रूपमा तपाइँको अनलाइन खरीद अनुभव गर्दैछ। अझ धेरै, तपाईले प्राय: तिर्नु भन्दा अधिक प्रतिस्पर्धी लागतमा यी सबै सेवाहरू प्रदान गर्नुहोस्। हामी कुनै लुकेको शुल्कबाट जोगिन सक्छौं र अर्डर गर्नु अघि हाम्रो ग्राहकहरू कुनै पनि समावेश लागतको बारेमा जानकारी दिन्छौं।
Phcoker.com मा गुणस्तर बलिदान बिना तपाईंले खर्च गर्नुभएको प्रत्येक रकमको अधिकतम मूल्य प्राप्त गर्नुहोस्। यदि तपाईं चीन, भारत, यूरोप र उत्तर अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ र शुद्ध सिब्युट्रामिन एचसीएल खरिद गर्नुहुन्छ भने तपाईं हामीलाई गिन सक्नुहुन्छ; हामी बस एक क्लिक टाढा छौँ!
माथि उठाउनुहोस्-सिबूत्रामिन एचसीएल (84485-00-7)
Sibutramine एचसीएल किन चलाउनुहुन्छ? यस औषधिको साथ, तपाईं दुई चराहरू एक ढुंगाको साथमा मार्न सक्नुहुनेछ। मोटापे को उपचार गर्नुको साथै यसको अन्य लाभहरू छन्। मोटापासँग सम्बन्धित कुनै पनि जीवन-धमकाउने रोगहरू र त्यस परिणामले तपाईंको फेफड़ों, हृदय र लिभरसँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्नेछ। यसबाहेक, तपाईंको विश्वास फिर्ता हुनेछ। कसलाई माया गर्ने माया गर्दैन? एकपटक तपाईंले सबै अचम्मका वसाहरू गुमाउनु भएको छ र अब त्यो मोडेल आकारको शरीर छ, तपाईंको आत्म-सम्मान धेरै उच्च हुनेछ। हामी सबैलाई हामी कसरी हाम्रो दैनिक गतिविधिहरू कसरी कार्यान्वयन गर्न प्रभाव पार्छौं भन्ने एक उत्कृष्ट तरिका उत्तम तरिकामा जान्छौं। अब तपाईं ती नौकरी साक्षात्कारहरू सामना गर्न सक्नुहुन्छ र सबै कार्यहरू हेर्न र राम्रो महसुस गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको टाउको माथि उठाइयो।
राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं सजिलै संग सिब्युटेराइन एचसीएल ले सकते हो। चाहे बिस्तृत हो, छुट्टी मा वा अझै पनि काम मा, तपाईं कि क्याप्सूल पप गर्न सक्छन् वा सबै को नोटिस गर्न को बिना कफी बनाउन सक्छन्। कठोर आहारहरू जसले तपाईंलाई भोकमरी र कडा अभ्यास छोड्दछ अतीतको कुरा हुनेछ। तथापि, यसले तपाईंलाई आहार र शारीरिक क्रियाकलापहरू तपाईंको वजन घटाने कार्यक्रममा समावेश गर्न सीमित गर्दैन। यसबाहेक, दुवैले तपाईंलाई सानो अवधिमा सिब्युटेरिन एचसीएल नतिजालाई सहयोग पुर्याउनेछ।
तपाईं सिपाट्रामिन एचसीएल खरिद गर्नबाट बचाउनको लागि विश्वसनीय स्रोतबाट खरीद गर्न सिफारिस गरिएको छ। इन्टरनेट धेरै नकले भरिएको छ, र हामी तपाईंको पैसा निकास तल जान चाहँदैनौं। Phcoker.com वेबसाइट हो जुन तपाईंलाई मूल Sibutramine एचसीएल को गारंटी छैन तर एक उच्च गुणवत्ता र अपमानित छैन। आजको प्रयास गर्नुहोस् र उत्कृष्ट सिब्युरेनाइन एचसीएल परिणामहरू अनुभव गर्नुहोस्।
2018-12-30 8 मा: 58 बजे
Buonasera, Sibutramina compresse in ricevere un campione with gentilmente, GRAZIE MILLE!
2019-01-02 1 मा: 57
यदि तपाईं सबै को माध्यम ले आफ्नो डेटा को माध्यम ले देख सकते हो।
यसैले तपाईंको स्वागत छ कि तपाईं यस कुरा को बारे मा बताइए हो, किनकी तपाईंको परिवार को साक्षात्कार हो? Possiamo fornire एक शिविर ग्रेडिंग मा 10 व्याकरण को लागि तपाईं को जाँच को
2018-12-309मा: 32 बजे
यदि तपाईं Sibutramina एचएलसी मा एक प्रमुख परिसर को पेशकश को पेशकश गर्छन? कम्प्रेसर, ग्रेज माइल!